Shiinaha oo balanqaadyo muhiim ah u sameeyey Soomaaliya (Sawiro + Warbixin) – SBC
Shiinaha oo balanqaadyo muhiim ah u sameeyey Soomaaliya (Sawiro + Warbixin)
Dawlada Shiinaha ayaa daboolka ka qaaday inay diyaar u tahay inay door muhiim ah inay sii wado ka qayb qaadashadeeda dib u dhiska & dib u heshiisiinta Soomaaliya iyadoo taasi kala kaashanaysa beesha caalamka.
Hadalkan waxaa ku dhawaaqay wasiirka arimaha dibada Shiinaha Yang Jiechi isagoo kulan heshiis lagu saxiixayey magaalada Bejingin kula qaatey wasiirka arimaha dibada ahna kuxigeenka ra’isalwasaaraha DFKMG ah Maxamed Cabdulaahi Oomar oo socdaal shaqo ku tagey Shiinaha. “Shiinuhu wuxuu si joogto ah u taageerayey qorsheyaasha dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo dadaalada DFKMG ah ee ku aadan dib u soo celinta amaanka & nabada gudaha” ayuu yiri Yang .
Wasiirka arimaha Shiinaha wuxuu intaasi ku darey in Shiinuhu uu aad ugu riyaaqsan yahay xiriirka taariikhiga ah uu la leeyahay Soomaaliya, isla markaana uu filayo in si wadajir ah ah dadaaladaasi loo sii xoojiyo iyadoo la iskaashanayo.
Geestiisa ayaa wasiirka arimaha dibada Soomaaliya Mr. Omaar wuxuu uga mahadceliyey dalwada Shiinaha taageerada Soomaaliya, isagoo sheegay inay ka rajeynayaan dawlada Shiinaha inay sii wado taageeradeeda muhiimka ah ee la xiriirta qorshayaahsa nabada & dib u dhiska dalka.
Ugu dambeyntii kulankaasi waxaa labada wasiir arimo dibadeed ay qalinka ku duugeen heshiisyo ku saleysan iskaashiga & wax wada qabsiga Shiinaha & Soomaaliya, sida uu SBC u xaqiijiyey wasiirka arimaha dibada DFKMG ah Maxamed Cabdilaahi Oomar oo khadka telefoonka ugu warameyey SBC isagoo ku sugan magaalada Beijing ee caasimada Shiinaha.#